Sergio Ramos oo saddex bil kahor saadaaliyay bixitaanka Zinedine Zidane – Gool FM
(Madrid) 31 Maajo 2018. Wargeyska AS ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos uu saadaaliyay in Zinedine Zidane uu ka tagayo kooxda, halka dad badan ay filayeen in mudo fog uu sii joogi doono kooxda.
Wararka xanta ah ee ku aadan in Zinedine Zidane uu ka tagayo Santiago Bernabéu ayaa waxay soo bilaawatay bartamaha xili ciyaareedkii dhawaan lasoo xiray, inkastoo uu ku guuleestay koobkiisii saddexaad xiriir ah ee tartanka Champions League.
Sergio Ramos ayaa sheegay bishii February ee lasoo dhaafay suurtagalnimada uu Zinedine Zidane kaga dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid dhamaadka xili ciyaareedka wuxuuna yiri: “Hadii aan ku guuleysano Champions League waxa waxaa suuragal ah in uu baxo Zidane, lakiin ma ogaan kartid laga yaabee inuu fasax heli karo”.
Hadalkan uu sheegay Ramos xiligaas ayaa waxay ahayd xili ay Real Madrid ku gudi jirtay xaalad adag ee dhanka kulamada La Liga, waxaana xiligaas la saadaalinayay in xitaa Real Madrid ay ka hari karto Champions League kadib marka ay wareega 16-ka kaga beegantay PSG kahor inta aysan ugu dambeyn ku guuleysanin.
Muxuu ka yiri wakiilka Alisson Becker wararka ku aadan in uu heshiis dhex maray kooxda Real Madrid?